Fa vonona aho tsy ny hafatotra ihany, fa ny ho faty any Jerosalema koa aza – FJKM Ambavahadimitafo Fa vonona aho tsy ny hafatotra ihany, fa ny ho faty any Jerosalema koa aza |
Fa vonona aho tsy ny hafatotra ihany, fa ny ho faty any Jerosalema koa aza
Publié le 29 août 2020 à 08:08
asa 22 : 10-14
Miarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Tompo
Tsy mbola misokatra ny fiangonana ny alahady 30 aogositra 2020, ka isika isan-tokan-trano kosa no samy hitarika ny fanompoam-pivavahana araka ny fandaharana eto ambany.
Lohahevitra : Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino
« Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo @ Anarako, dia eo afovoany Aho », Matio 18:20
Miderà an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina.
Miderà Azy eo amin’ny habakabaky ny heriny.
2 Miderà Azy noho ny asany lehibe;
Miderà Azy araka ny haben’ny voninahiny.
3 Miderà Azy amin’ny fitsofana ny anjomara;
Miderà Azy amin’ny valiha sy ny lokanga.
4 Miderà Azy amin’ny ampongatapaka sy ny dihy;
Miderà Azy amin’ny zava-maneno tendrena sy ny sodina.
5 Miderà Azy amin’ny kipantsona maneno;
Miderà Azy amin’ny kipantsona tsara feo.
6 Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah.
Hira FF4 : Ry Fanahy ô midina
1. Ry Fanahy ô midina,
Manatreha anay anio Ianao
Ny vavakay mangina
Vetsovetsom-po ‘zay atolotray
Vola sy ny harena
Samy tsy anananay
Fa indro ny vavakay mangina
Fanolora-tena ho Anao tokoa
2. Ry Fanahy ô, monena
Aza mba mandao anay Ianao
Ka tsy hahafoy hiarak’Aminao
Ota sy rendrarendra
Samy te handavo anay
Soa ihany, soa teo Ianao Fanahy
Vonona hitahy ny fiainanay
3. Ry Fanahy ô, meteza
Mba handray anay ho mpianatrao
Avia Ianao, mampahereza
Hahatonga anay mba ho irakao
Eso sy fitsapana
Samy manakivy anay
Ka taomy, taomy hanam-po mafana
Herim-po vaovao hiasa ho Anao
Joba 2 : 1-10
Ny fizahan-toetra faharoa nahazo an’i Joba, sy ny namangian’ny sakaizany telo lahy azy
1 ARY tamin’ny indray andro koa dia avy ireo zanak’Andriamanitra hiseho teo anatrehan’i Jehovah, ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy hiseho teo anatrehan’i Jehovah. 2 Dia hoy Jehovah tamin’i Satana: Avy taiza hianao? Ary Satana dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe: Avy nizahazaha teny amin’ny tany aho ka nivezivezy teny.
3 Dia hoy Jehovah tamin’i Satana: Efa nandinika an’i Joba mpanompoko va hianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin’ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an’Andriamanitra ka mifady ny ratsy? Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika Ahy hamongotra azy foana aza hianao. 4 Ary Satana dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe: Hoditra fefin’ny hoditra, eny, izay rehetra ananan’ny olona dia homeny ho fefin’ny ainy. 5 Fa ahinjiro ange ny tànanao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony–raha tsy handa Anao eo imasonao aza izy e! 6Dia hoy Jehovah tamin’i Satana: Indro, eo an-tànanao izy; ny ainy tokana ihany no aza asiana.
7 Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan’i Jehovah ka namely vay ratsy an’i Joba hatramin’ny faladiany ka hatramin’ny tampon-dohany. 8 Dia naka tavim-bilany hihaorany izy, raha nipetraka teo an-davenona.
9 Ary hoy ny vadiny taminy: Mbola mitana ny fahamarinanao ihany va hianao? Mahafoiza an’Andriamanitra hianao, dia aoka ho faty. 10 Fa hoy izy taminy: Tahaka ny tenin’ny anankiray amin’ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin’Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa?
Tamin’izany rehetra izany dia tsy nanota tamin’ny molony Joba
Marka 10 : 32-34
32 ARY Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dàlana niakatra ho any Jerosalema, ary Jesosy nandeha eo alohany; dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka Azy dia natahotra.
Ary naka ny roa ambin’ny folo lahy indray Izy, dia nilaza taminy izay efa hanjo Azy 33 ka nanao hoe: Indro, miakatra ho any Jerosalema isika; ary ny Zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy mpanora-dalàna; ary hohelohiny ho faty Izy ka hatolony amin’ny jentilisa; 34 ary hanao Azy ho fihomehezana ireny sy handrora Azy sy hikapoka Azy ary hahafaty Azy; fa rehefa afaka hate-loana, dia hitsangana indray Izy.
Asa 21 : 10-14
10 Ary raha nitoetra tao andro maro izahay, dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. 11 Ary rehefa tonga tao aminay izy, dia noraisiny ny fehin-kibon’i Paoly, ka namatorany ny tongotra aman-tànan’ny tenany, dia hoy izy; Izao no lazain’ny Fanahy Masina: Toy izao no hamatoran’ny Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon’ity fehin-kibo ity, ka hatolony ho eo an-tànan’ny jentilisa izy. 12 Ary raha vao renay izany, dia nangataka taminy izahay mbamin’izay nonina teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. 13 Fa Paoly namaly ka nanao hoe: Nahoana hianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vonona aho tsy ny hafatotra ihany, fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran’i Jesosy Tompo. 14 Ary nony tsy nanaiky izy, dia nitsahatra izahay ka nanao hoe: Aoka ny sitrapon’ny Tompo no hatao.
Hira : feonjavamaneno
Fanekem-pinoana : Apostolika
Fihirana 298 : Aina no fetra
1. Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka,
Aina no fetra anarahana anao,
Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka,
Ny fanompoana tsy maintsy atao.
Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
Ilay hazo izay nanavotana anay;
An-tsitrapo no anoloranay tena,
2. Aina no fetra ho enti-manoa
Ilay Zanak’ondry nisolo anay;
Indreto izahay, hilanja faneva, sns…
3. Aina no fetra, ry Tompo malala!
Aina no fetran’ny fitiavanay;
Ka sanatria izay handao na hiala;
Mandrakizay, ho Anao izahay.
4. Aina no fetra, ny nofo anefa
Mora mirona ho lavo indray,
Ka manampia, ry Mpandresy mahefa!
O! mba tantano, hazony izahay.
5. Aina no fetra, ka ampio, ry Fanahy!
Aina no fetra, vonjeo e, ry Ray!
Aina no fetra, izahay re no sahy;
Fihirana fanampiny 54
1. Mandrosoa hatrany
Aza kivy foana
Zava-tsoa tsy lany
Ao anatin’ny finoana.
Fiv : ‘Reto no miray
Hery lehibe tokoa dia
Ny finoana, Ny fanantenana,
2. Tano tsy ho very
Fa mitondra hery
Eny an-dàlana ombana.
‘Reto no miray sns…
3. Aina vaovao
Ka tanako tokoa ho ahy.